को बन्छ कंग्रेस आईको अध्यक्ष ? आज हुँदैछ फैसला | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
को बन्छ कंग्रेस आईको अध्यक्ष ? आज हुँदैछ फैसला
काठमाडौं, २५ साउन । भारतमा कांग्रेस आईको पार्टीको नयाँ अध्यक्ष को बन्ने ? भन्ने विषयलाई लिएर नयाँ चर्चा तथा परिचर्चा सुरु भएको छ । अब पार्टीको अध्यक्ष को बन्छ ? यो विषय तय गर्नको लागि अहिले कंग्रेस आईको कार्यसमिति बैठक नयाँ दिल्लीमा जारी छ ।
उक्त बैठकमा राहुल गान्धीले राजीनामा फिर्ता लिन अस्विकार गरिसकेका छन् । तर, उनले पार्टीको सांगाठनिक काममा तल्लिन हुने कुराको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अब राहुलले विपक्षी नेताको रुपमा आम नेता तथा कार्यकर्तासँग काँधमा काँध र हातमा हात मिलाएर सहकार्य गर्ने संकल्प जाहेर गरेका छन् । यो समाचार आजको बिबिसी हिन्दीमा विशेष महत्वको साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
उक्त पार्टीको कार्यसमितिले विभिन्न पाँच उपसमिति बनाएको छ । जहाँ देशका अलग अलग भागबाट आएका पार्टी पदाधिकारीसँग विचार विमर्श गरेको छ । अध्यक्ष पदमा मुकुल वासनिक, सुशील कुमार शिंदे, मल्लिाकार्जुन खड्गे, प्रियंका गान्धी, ज्योतिरादित्इ सिंधिया र सचिन पायलटको नाम खास चर्चामा छ । खड्गे केन्द्रिय मन्त्री रहनुको अलावा पछिल्लो लोकसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेतापनि थिए ।
वासनिक यतिवेला कांग्रेस महासचिव छन् । र, उनी गान्धी परिवारसँग निकै घनिष्ठ रहेको बुझिएको छ । लोकसभा चुनावमा पार्टीले व्यहोरेको हारलाई लिएर राहुल गान्धीले कांग्रेस अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, केन्द्रिय कार्यसमितिले उनको राजीनामा स्विकृत गरेको थिएन् । PHOTO Source : EPA
२४ मङ्सिर । न्यूजील्याण्ड प्रहरीले मङ्गलबार “सेतो टापु” भनेर चिनिने ह्वाइट आइल्याण्डमा भएको ज्वालामुखी विस्फोटबाट
चेकोस्लोभाकियाको अस्पतालमा आक्रमण, चारको मृत्यु
२४ मङ्सिर । चेकोस्लोभाकियाको पूर्वी शहर ओस्ट्रोभामा अवस्थित अस्पतालमा मङ्गलबार एक बन्दुकधारीले प्रहार गरेको गोलीबाट
२४ मङ्सिर । अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको द्धन्द्धग्रस्त प्रान्त नान्गाहारमा सुरक्षा कारबाही जारी रहेको अवस्थामा
२४ मङ्सिर । चालक दलका सदस्य सहित ३८ जना सवार चिलीको सैनिक बिमानसँग सोमबार “रेडियो
२४ मङ्सिर । दक्षिणपश्चिमी अफ्रिकी महाद्वीपमा स्थानीय समयानुसार सोमबार ५.९ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी
ओडिशामा ७२ वर्षीया वृद्धाको शौचालय नै घर बन्यो
मयुरभञ्ज, ओडिशा, २४ मङ्सिर । भारतको ओडिशा राज्यको मयुरभञ्ज जिल्लामा एक ७२ वर्षीया आदिवासी वृद्धा
पर्यटक पुग्दा ज्वालामुखीे टापुमा बिस्फोट भएपछि…(भिडियोसहित)
काठमाण्डौँ २४ मंसिर । न्युजिल्याण्डमा ज्वालामुखी बिस्फोट भएको छ । न्युजिल्याण्डको ह्वाइट आइसल्याण्डमा रहेको ज्वालामुखी